महिलाहरुले कण्डम मन नपराउनुका ४ कारण यस्ता छन्।के लाग्छ हजुरलाई?यस्ता कारण ठीक होलान् त? – Jagaran Nepal
महिलाहरुले कण्डम मन नपराउनुका ४ कारण यस्ता छन्।के लाग्छ हजुरलाई?यस्ता कारण ठीक होलान् त?
महिलाहरुले रुचि नराख्दा कण्डम प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दो छ ! खासमा महिलाहरुले किन कण्डम लगाएर शारिरिक सम्पर्क रुचाउँदैनन् ?यो प्रश्नको जवाफ यस्तो छ-–कण्डम प्रयोग गरेर शारिरिक सम्पर्क गर्दा कम आनन्द हुन्छ ।–प्रायः महिलाहरुलाई कण्डमको बास्ना मन पर्दैन । यसकारण पनि उनी कण्डम लगाएर शारिरिक सम्पर्क राख्न रुचि देखाउँदैनन् ।–एलर्जी हुने डर । यो कारणले पनि महिलाहरु कण्डम प्रयोग गर्न अप्ठयारो मान्छन् ।
३. बासना-केही युवतीहरुले कण्डमको बासनालाई लिएर आफ्नो पार्टनरसँग विवाद गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई कण्डमको बासना मनपर्दैन ।४. फुट्ने डर-से-क्सको समयमा महिलाहरुलाई कण्डम फुट्ने डरले निकै सताउने गर्छ । यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो से-क्स आनन्द लिन सक्दैनन् ।जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित यौ-नस-म्पर्क गुर्नपर्छ । विभिन्न समस्या एवम रोगहरुबाट संक्रमण हुनुभन्दा सुरक्षित यौ-न आनन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ ।